वि.सं. २०७७ आश्विन २७ गते मङ्गलवारको राशिफल
On: २०७७ आश्विन २७ गते, मंगलवार, ०५:०० बजे प्रकाशित
ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट)
आज: परमा एकादशीव्रत।
आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरूलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
मेषः केही सुधार आउने दिन रहेको छ। रपनि आत्मप्रशंसाको मनोविज्ञानले आफ्नै मुल्याङ्कनमा ह्रास ल्याउनसक्ने छ। बढी वाणीविलास हुनसक्ने र गोपनीयता खुस्कने संभावनालाई पनि नकार्नसकिन्न।
वृषः कामकार्यमा हलो अड्किने सम्भावना छ। गरेको काममा पनि अपयश मिल्ने छ। तपाई विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरू सक्रिय हुनेछन्। मनमा संकीर्णता र स्वास्थ्यमा मन्दि आउने छ। आकस्मिक लाभ पनि हुनेछ।
मिथुनः दिन अनुकूल देखिएको छ। शारीरिक क्षमताको विकास हुनेछ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ। जोशजाँगर बढ्ने छ। काममा रुचि बढ्ने र थातिरहेका कामहरु पूरा गर्नसकिने छ। व्यवसायिक लाभ हुनेछ।
कर्कटः आशा अपेक्षा बढी हुनेछ तर कम उपलब्धिले चित्त बुझाउनु पर्ने खालको दिन रहेको छ। अपेक्षित उठती हुन कठिन पर्नेछ भने सञ्चित धनको अपव्यय नहोला भन्नसकिन्न। परोपकार गर्नसकिने छ।
सिंहः मनखुश वातावरण सृजना हुनेछ। पुराना साथसंगतीसँग भेट्घाट हुनपाइने छ। पेशा तथा व्यवसायबाट केही लाभ पनि हुनेछ। कुनै व्यवसायिक कामकार्यको बारेमा योजना तर्जुमा हुनजाने छ।
कन्याः अल्लि सावधानी अप्नाउनु पर्ने दिन छ स्वास्थ्यमा मन्दि आउने छ भने अनावश्यक आलोचनाको सामना गर्नपर्ने छ। खर्चको मात्रा पनि बढेर जाने देखिएको छ। संयम गर्न जरुरी पर्नेछ।
तुलाः किसानपेशा, उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय आदिमा गोचरग्रहको अनुकूल प्रभाव देखिएको छ। उन्नति प्रगति हुनगइ राम्रो लाभ उठाउन सक्नु हुनेछ। सहयोगी एवं समर्थक पनि बढ्ने छन्।
वृश्चिकः मान ईज्जत प्रतिष्ठा बढ्ने दिन परेको छ। ठूलाबडा व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध जोडिने र व्यवसायिक उन्नति प्रगति हुनेछ। मान्यजनको साथ सहयोग र आशीर्वाद मिल्नेछ। गाम्भीर्यता जरुरी पर्नेछ।
धनुः कान्तिमा मलिनता एवं माथिल्लो तहबाट अपयशको बाबजुत स्थितिमा सुधार आउने छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा केही प्रगति हुनेछ। पेशागत उन्नति भई लाभ र अन्तमा न्याय मिल्ने छ।
मकरः दिन अल्लि विपरित रहेको छ। स्वास्थ्यमा मन्दि आउनसक्ने भय देखिएको छ। आहार विहार एवं जनव्यवहारमा ख्याल पुर्याउन र यात्रादिमा संयमीत तथा धैर्य हुन जरुरी देखिन्छ।
कुम्भः ईच्छा अपेक्षा अनुकूल उपलब्धि हात पर्न अल्लि गाह्रो पर्नेछ। शंकाआशंका एवं कैफियतको बाबजुत दाम्पत्य एवं प्रेम सम्बन्धमा केही सुधार आउने छ। व्यापार व्यवसायमा पनि केही प्रगति हुनेछ।
मीनः पेशा एवं व्यवसाय तथा कामकार्यबाट लाभ गर्नसकिने छ। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बलियो भएर आउने छ। पराक्रम गर्नसकिने छ। व्यापार बढ्ने छ। तपाईको पक्षमा संझौता हुनेछ।
राशिफलमा बताइएको फल समष्टिमा गोचर ग्रहको हिसाबमा आँकलन गरिएको हो। जसको महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनी दशामा अनुकूल ग्रह चलिरहेको छ उसलाई राशिफलमा बताइएको शुभ फल बढी मिल्ने र अशुभ फल कम घटित हुने हुन्छ। त्यस्तै जसको महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनी दशामा प्रतिकूल दशा चलेको छ उसलाई राशिफलमा बताइएको अशुभ फल बढी घटित भइ शुभफल कम मिल्ने हुन्छ। यो कुरालाई मनन् गरेर राशिफलमा बताइएका फलको भाव बुझिदिनु होला। धन्यवाद।
यो महिनाको राशिफल
आफ्नो भाग्य, भविष्य, अध्ययन, विदेश, प्रेम तथा विवाह, सन्तान, पेशा, व्यापार बिजनेश, व्यवसाय, जागिर, स्वास्थ्य, आवासीय एवं व्यापारिक भवनहरूको वास्तु परीक्षण लगायतका मानवजीवनसँग जोडिने विभिन्न आयामहरूको बारेमा ज्योतिषीय तथा वास्तु परामर्श र नयाँ तथा पुराना रोगहरूको आयुर्वेदिक उपचाको लागि ज्यो. दीपक सुवेदी गुरुलाई ९८५११३१७४७, ९८४१२२३१२६, ९८०३८७९९७८, ०१४५३१७४७ मा संपर्क गरी एपोइन्टमेन्ट लिएर भेट गर्नसक्नु हुनेछ।
गुरुको युट्युबः Forecast Television ईमेलः [email protected] ,फेसबुक पेजः https://www.facebook.com/astrologerdeepakguruji रहेको छ।
२०७७ आश्विन २७ गते, मंगलवार, ०५:०० बजे प्रकाशित